Australia oo dib u dhigaysa wax ka badalidda canshuurta - BBC Somali
Australia oo dib u dhigaysa wax ka badalidda canshuurta
17 Maajo 2016
Xukuumadda Australia ayaa dib u dhigi doonta qorshe ay doonaysay inay ku soo bandhigto canshuur lagu soo rogi lahaa dadka shaqooyinka hoose qabta, kaddib markii ay diidmo ka timid beeraleyda iyo qaybaha dalxiiska.
Dadka ku soo gala dal kugalka shaqada ee maalmaha aan la shaqayn ee todobaadka ayaa lagu waday in laga saaro hanaanka dalkaas lagu soo galo dal ku gal la’aanta oo ay bixiyaan 32.5 senti halkii Doollar ee ay ka shaqaystaan Australia.
Australia ayaa bixisay 214, 830 dal kugal oo lagu shaqeeyo maalmaha todobaadka u dambeeya 2014-2015. Tirada ugu badan ee dadkaas ayaa ah muwaadiniinta Britain oo la siiyey 44,730.
Xukuumadda ayaa qiyaasaysa in haddii dadkaas canshuurta lagu kordhiyo ay ka soo xaroon doonto ilaa $396 Malyan oo Doollar muddo seddex sano ah.